NgoLwesithathu, Oktobha 6, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UMat Chandler
Ukuhanjiswa kobudala kwiiSayithi zeNethiwekhi yoLuntu
Kule nyanga ndiqale ukufundisa ikhosi yasekholejini kwiNtengiso yeWebhu e IZiko lobugcisa lase-Indianapolis. Uninzi lwabafundi abali-15 kwiklasi yam sele besondele kwisidanga kuyilo lwefashoni kunye nentengiso yentengiso, kwaye ikhosi yam iyafuneka kubo.
Ngapha koko, ngobusuku bokuqala xa abafundi bangena kwilebhu yeekhompyuter bahlala phantsi, bazikhethela ngokwabo ubukhulu becala: abafundi bam befashoni abali-10 ngasekunene kwam, iiwebhu zam ezintlanu kunye nabafundi abenza imizobo ngasekhohlo. Ndandifana nomdaniso wesikolo samabanga aphakamileyo kunye namantombazana kunye namakhwenkwe atyalwe ngokuchasene neendonga ezichaseneyo, icala ngalinye lijonge kwelinye icala.
Njengoko ndandihamba ngaphaya kwesilabhasi kunye nokwaziswa kwekhosi, imidiya yoluntu yadlala indima enkulu. Ndiqonde ukuba abafundi bazakuyihamba yonke, uninzi lwazo luye kwilebhu kwangethuba ukuza kujonga i-imeyile kwaye Facebook. Kodwa ndaphela ndimangalisiwe.
Malunga nesibini kwisithathu seklasi yam khange sisebenzise okanye sijonge Twitter. Uninzi lwazo alwazi nokuba luyintoni okanye luyintoni. Mnye kuphela kubo owayebhlog, kwaye omnye enewebhusayithi yakhe.
Umhlathi ujonga umgangatho
Yima, uthetha ukuba undixelele ukuba esona sixhobo sinentambo, esidityanisiweyo, esihlala sikusebenzisa izixhobo ezisisiseko zokunxibelelana nabantu? Ngaba amajelo osasazo aqhubela phambili iintsomi nobuxoki? Ngaba ndinyanzelekile kwilizwe lam elincinci kangangokuba ndide ndalikhathalela lonke icandelo labemi?
Ndibona ukumangaliswa kwam, omnye wabafundi bam uphendule wathi, “Oo ndiyibonile kuFacebook le: 'ithunyelwe ngeTwitter.' Andizange ndiyazi ukuba yile nto iyiyo. ”
Kulungile, ke bendidlalela ukothuka kwam ngenxa yomphumo wokuhlekisa. Ndiyazi ngokupheleleyo ukuba ukwamkelwa kwezixhobo ezahlukeneyo kunye namajelo kwahluka, phakathi kwezinye izinto ezininzi, iqela lobudala. Ndiyazi ukuba i-Twitter izuza ngokuthandwa phakathi kwabantu abadala. Kodwa ndothuswa kukuba zingaphi kwezi zinto zokuqala kwangamashumi amabini anamashumi amabini ndingazi nokuba yintoni i-Twitter.
Oku kwandibangela ukuba ndibuyele emva ndiye kujonga kuphando lwakutshanje malunga nokunikezelwa kweminyaka yenethiwekhi yoluntu. NgoFebruwari 2010, kusetyenziswa idatha evela kuGoogle Ad Planner, IPingdom yasebukhosini ibonakalise ukuba kwiziza ezili-19 ezithandwa kakhulu kwezonxibelelwano, abaneminyaka eli-18 ukuya kwengama-24 ubudala babalelwa kwi-9% yabasebenzisi. Kwimeko ye-Twitter, eli qela linye libalelwa ngaphantsi kwe-10%, kunye ne-64% yabasebenzisi be-Twitter baneminyaka engama-35 okanye ngaphezulu.
Ngokubanzi, i-35-44 kunye ne-45-54 yeminyaka ubudala ilawula iisayithi zokunxibelelana kwezentlalo, ezimele i-74% yabasebenzisi abadibeneyo. Into enomdla kukuba abo badala nge-0-17 (iikhompyuter zabasebenzisi abaneminyaka engama-zero ubudala?) Iakhawunti ye-21%, ibenza ukuba babe lelona qela lesibini ngobukhulu labasebenzisi.
Masikhawuleze siye kwikota enye ukuya kuMeyi ka-2010 kunye nophando olwenziwe nguEdison Research olubizwa ngokuba “kukusetyenziswa kweTwitter eMelika: 2010.” Ngokophando lwabo, abaneminyaka eli-18 ukuya kwengama-24 ubudala benza i-11% yabasebenzisi be-Twitter ngenyanga. Ngama-52% adibeneyo, amaqela angama-25-34 kunye nama-35-44 asalawula.
Ngoku, kukho umahluko omnye obonakalayo wezibalo phakathi kweedemografi ezimelwe apha: abaneminyaka eyi-18-24 ubudala baneminyaka esixhenxe kunokuba beyi-10 yabo bonke abanye. Ke kukho umda othile wokunciphisa amanani ngokusekwe kolu hleko, kodwa ndiqinisekile ukuba konke kuphuma ekuhlambeni.
Kutheni bengekho ebhodini?
Ukuba ndiyakholelwa kwisifundo sam sokuqala sesemester, eyona nto ibalulekileyo kwintengiso yewebhu kukuba umxholo wakho kufuneka ubonelele ngexabiso kubathengi. Ngokwabafundi bam, uninzi lwabo alwazi buqu nabani na osebenzisa kakhulu i-Twitter. Ke ngoko indawo kunye nenkonzo yayo ayiniki xabiso.
Okwesibini, wonke umntu eklasini wayejonga u-Facebook. Abanye baxele ukuba babone i "versage" nge-Twitter kuhlaziyo lwesimo, bebonisa ukuba abanye babahlobo babo bayayisebenzisa i-Twitter. Oku kungqina isiqwenga sesibini sesifundo sam (kunye necandelo elikhulu le- Ndonwabile imodeli yeshishini), eyayingelilo iqonga elibalulekileyo, ngumxholo. Khange bakhathalele ukuba luvela phi uhlaziyo, bayazi kuphela ukuba banokulufumana ngeqonga abalithandayo.
Okokugqibela, zombini idatha yophando engentla kunye nobungqina bam be-anecdotal bubonisa umbono wokuba abafundi beekholeji baxakeke kakhulu besenza ezinye izinto ukujonga rhoqo (okanye ukujonga) ubuninzi beesayithi, iinethiwekhi kunye namaqonga. Uninzi lwabo luxele ukuba bachitha ixesha besenza ikhosi kwaye besebenza imisebenzi yexeshana kunokuba babhanxe kwi-intanethi.
Ke senza ntoni?
Njengabathengisi abakwi-Intanethi kufuneka siyiqonde kwaye siyamkele le yantlukwano yokusetyenziswa kwamaqela ahlukeneyo ngokweminyaka. Kuya kufuneka sithathe umxholo siye kubantu esifuna ukufikelela kubo besebenzisa izixhobo abazisebenzisayo. Oku kufezekiswa ngophando olunzulu kunye nokucwangciswa kwamanyathelo akwi-Intanethi, nangokwazi ukuba zeziphi iiplatifti zokubeka iliso, ukumodareyitha kunye nokulinganisa. Ngaphandle koko, siphosa ixesha, umgudu kunye nemali emoyeni kwaye sinethemba lokuba abathengi abalungileyo baya kubamba.
tags: ubudalaukuhanjiswa kweminyakaLaura lippayImidiya yokuncokolaTwitter
UMat nguMphathi woMxholo weDijithali I-Ingersoll Rand Security Technologies, kwaye ungumhlohli olungeleleneyo weNtengiso yeWebhu e IZiko lobugcisa lase-Indianapolis. Unamava angaphezulu kweminyaka eli-10 yokudala isicwangciso kunye nokulawula umxholo we-Intanethi kwimibutho yamashishini kubandakanya Ndonwabile, IZiko loNyango leLangone lezonyango kwaye Inethiwekhi yezeMpilo yoLuntu. Unengqokelela yeerekhodi ze-vinyl kunye nepug egama linguGeorge Benson.
I-B2B: Iividiyo zichaphazela izigqibo zokuthengwa
Kutheni iSicwangciso sakho seNethiwekhi sisilela kuwe
Oktobha 6, 2010 ngo-5: 25 PM
Okumangalisayo kukuba kunomdla, ngakumbi ukujonga kwakho ngaphaya kwamanani. Ngelixa abantu abancinci benganyanzelekanga ukuba bathontelane kwi-Twitter, babona umxholo ngandlela thile njengoko zonke ezi ndlela zonxibelelwano zihlanganisene, ngoko ke kufanelekile ukuba usebenzise i-Twitter yale minyaka isetiweyo.
Indawo yam (cofa ukuze uhlele)
Okt 7, 2010 ngexesha 8:38 AM
Ndikhumbula unyana wam endihleka xa wayefunda kwisikolo samabanga aphakamileyo malunga nokuba ndiyisebenzisa kangakanani i-imeyile. Ngoku ekubeni emdala kwi-IUPUI, i-imeyile iyimfuneko kwaye utshintshele nakwiselfowuni ukuze aqhubeke. Andazi ukuba ulutsha luqhuba isimilo, ndicinga ukuba yimfuneko yento eluqhubayo. I-Twitter ilula kakhulu kum ukucola kunye nokuhluza ulwazi, ngelixa i-Facebook ingakumbi malunga nenethiwekhi kunye nolwalamano lomntu. Andiyi kumangaliswa ukuba unyana wam 'abhale i-tweeting' kwiminyaka embalwa ukuba abelane ngolwazi kunye nenethiwekhi yakhe ngokufanelekileyo.
Oktobha 7, 2010 ngo-9: 53 PM
Mfana, ngaba uye wabetha imithambo-luvo! UDoug Karr uza kukuxelela ukuba uthethe neeklasi zam ezimbalwa kwi-IUPUI kwaye mhlawumbi ulibele ukuba zazincinci kangakanani! Kuyavunywa ukuba, zazingacacanga gca malunga nemidiya yokuncokola, kodwa ndisebenzise kakhulu imidiya yoluntu kwizifundo zam kwaye bendihlala ndinobunzima bokwenza abafundi ukuba "bathenge" kwixabiso losasazo lwentlalo ekufundeni nakwimpawu zobuqu.
Esinye sezizathu zokuba ndishiye izifundiswa kungenxa yokuba "akukho mntu wayethenga into endiza kuyithengisa" ke ndiye ndahamba ndaya kufuna enye indlela apho abantu bakulungeleyo ukwenza izinto ezintsha ekufundiseni nasekufundeni, kwintengiso, okanye nantoni na! Ndinemvakalelo embi enokuthatha ixesha, kodwa ndinexesha kunye nomonde wokulinda kwaye ndifunde ngakumbi ngelixa ndilindile. O :-)
Oktobha 9, 2010 ngo-10: 46 PM
Bendicinga ukuba sisithi nje. Ndiziva ndingcono ngoku ndisazi ukuba abanye bafumana into efanayo. Ngexesha lasehlotyeni, iYunivesithi yaseMarian ixhase iHobNob 2010, umsitho wothungelwano lwezopolitiko oququzelelwe yiGreater Indianapolis Chamber of Commerce. IYunivesithi yaseMarian yayingumxhasi wemidiya yoluntu. Sizamile ukugaya abafundi ngeFacebook nange-imeyile kuTwitter ngaphambili, ngexesha, nasemva komsitho ukuze sitshintshele ipolo yasimahla ye-MU kunye nesidlo esihle. Isebenze kakuhle, kodwa bekunzima ukufumana abafundi. Inzima ngokwenene. Emva koko kwafuneka sibaqeqeshe. Ngokuqinisekileyo ngekhe siphinde sizame kwakhona.
Oktobha 10, 2010 ngo-10: 08 PM
Ulutsha kwi-Twitter? Kuphela "kwi-cyberstalk celebs". Ndibuzile!
Okt 13, 2010 ngexesha 11:51 AM
Uxolo ngempendulo elityazisiweyo, bendigula.
Yindawo enomdla. Iklasi yam yintengiso yeWebhu, kwaye 2/3 yeklasi yam yenziwe ziintengiso zentengiso zefashoni. Nangona kunjalo ezona zinto zisisiseko kwintengiso ye-Intanethi zezangaphandle, nangona bekwiqela leminyaka ekucingelwa ukuba linxibelelene kwaye lithengiswa ngokungenanceba.
Ngaba zilungile ekucofeni imiyalezo yokuthengisa? Ngaba abazi ngamacebo asetyenziswayo kubo? Okanye ngaba azizisebenzisi izixhobo njengoko abathengisi befuna ukukholelwa?
Ndiqinisekile ukuba ndiza kuthetha ngakumbi njengoko siqhubeka ngekota kwaye ndikhetha ubuchopho babo.